Seranam-piaramanidina Don Mueang Bangkok - DMK ~ Journey-Assist - Thailandy
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Jeografia, seranam-piaramanidina, famindrana manerana an'i Thailand » Seranam-piaramanidina Don Mueang Bangkok - DMK
Seranam-piaramanidina Don Mueang Bangkok - DMK
Ny fijerin'ny seranam-piaramanidina Don Muang
Scheme Don Muang Airport
Fifandraisana mifandray amin'ny seranam-piaramanidina Don Muang ary ny fomba hahazoana any
Sary sy famerenan'ny seranam-piaramanidina Don Muang
Birao fahatongavana sy fialana an-tserasera (seranam-piaramanidina Don Muang)
Seranam-piaramanidina Don Muang, Bangkok
Io seranam-piaramanidina Bangkok io, izay eo an-toerana dia antsoina matetika hoe "antitra". Nanomboka niasa tamin'ny taona 1914 izy. Tamin'ny 2006, dia nametraka ny laharana faha-2 teo amin'ny seranam-piaramanidina Azia Atsimo Atsinanana i Don Muang tamin'ny fifamoivoizana mpandeha ary ny toerana voalohany tany Thailand.
Saingy hatramin'ny nananganana ny seranam-piaramanidina tamin'ny 2006 Seranam-piaramanidina Suvanaphumi (BKK - Suvarnabhumi) ao Bangkok, Laurels ao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra any Thailandy no nandalo azy.
Ny seranam-piaramanidina Don Muang no misy 24 km avaratr'i Bangkok, ka io no mampifandray azy amin'ny lalambe iray sy ny lalamby.
Ankehitriny, ity seranam-piaramanidina ity dia manolotra sidina entana sy mpandeha mpandeha, anisan'izany ny sata, ao Thailandy, fa mihazona hatrany ny toerany iraisam-pirenena.
Izy io dia tena malaza eo amin'ny mpitsangatsangana, satria ny sidina fiaramanidina ambany iray no miankina amin'izany ary ambany ny vidin'ny tapakila fiaramanidina.
Diagram an'ny seranam-piaramanidina Don Muang.
Ny seranam-piaramanidina dia misy rihana 5, fa ny lehibe indrindra no voalohany miaraka amin'ireo efitrano fahatongavan'ireo ary ny fahatelo, miaraka amin'ny efitrano fialana.
Diagram an'ny seranam-piaramanidina Don Muang (rihana voalohany)
Efitrano fahatongavana, fanaraha-maso pasipaoro, fitakiana kitapo, fifanakalozana fifanakalozana, vata no hita eto. DGAC, AIS sy ny True Move mobile, fitahirizana entana, fitakiana kitapo ary fananana very. Misy ihany koa ny mpikirakira telefaona finday.
Avy eto dia miditra ny tanàna, miditra amin'ny taxi sy bus.
amin'ny rihana faharoa an'ny seranam-piaramanidina biraon'ny seranam-piaramanidina no misy. Fiaramanidina fiaramanidina.
Eto no misy: Efitra fialana, faktiora fisavana sy fanaraha-maso pasipaoro. Ary koa ny fangatahana vaovao, trano fidiovana, kafe, fifanakalozana fifanakalozana.
Mazava ho azy fa aorian'ny faritra rehefa vita ny fisoratana anarana dia misy adidy maimaim-poana.
Diagram an'ny seranam-piaramanidina Don Muang. (Rihana faha-3)
Efatra efatra - fivarotana, trano fisakafoanana, birao fandinihana. Ny kafe sy ny sakafo haingana (Burger King sy McDonalds), misy ny trano fisakafoanana Fuji, ny vidiny mirary.
Efatra fahadimy - birao fiaramanidina.
Fampahalalana mahasoa momba ny seranam-piaramanidina Don Muang
Amin'ny rihana voalohany sy fahatelo, akaikin'ny efitrano fidiovana dia misy loharano misy rano fisotro foana.
Amin'ny fizarana fahefatra manomboka amin'ny zotra fitandremana dia azonao jerena ny fisintonana sy ny fampandehanana fiaramanidina. Amin'ny maha-fitsipika azy dia tsy feno olona, ​​ary izay no antony mahatonga azy mangina sy mahazo aina.
Ireo mpivarotra dia hita eo amin'ny rihana voalohany amin'ny fivoahana, ary eo ambanin'ny scoreboard mahazatra.
Any amin'ny seranam-piaramanidina mihitsy, ao amin'ny rihana fahatelo dia misy hotely misy vidiny adiny iray. 500 baht isan'ora, na fiainana 2500 isak'alina.
Misy Wi-Fi maimaim-poana ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Avy any Don Muang mankany Bangkok
Teti-bola, mandeha amin'ny lamasinina. Manohitra ny fivoahana avy amin'ny seranam-piaramanidina misy ny fiaran-dalamby. Amin'ny lamasinina dia afaka miditra amin'ny seranam-piaramanidina Chatuchak ianao (Chatuchak). Ity serivisy ity dia miditra amin'ny metro.
Taxi na nafindra hotely. Ny hetra dia azo alaina eny an-toerana ary ny vidiny dia miankina amin'ny ny anjaranao. Ny famindrana dia azo alamina mialoha, ohatra, amin'ny endrika manokana eto ambany. Amin'ity tranga ity, ny tranga mpamily, hihaona aminao ny mpamily miaraka amin'ny famantarana ao amin'ny efitrano fahatongavan'ny fahatongavana, manampy amin'ny fanaterana entana ny fiara sy enta-mavesatra. Ny tsy fivadihana ny vidiny ary tsy ilaina ny fifanekena.
Bus avy any Don Muang
Ireo bisy BTMA tsy tapaka vidiny 30 baht. Manana lalana izy ireo - A1 (BTS Chatuchak sy Mochit bus bus), A2 (Tsangambato Fandresena), A3 (Lumpini Park - afovoany), A4 (Sanamluang). Miala amin'ny rihana voalohany ny fiara fitaterana, fivoahana laharana faha-1.
Bus limo miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana sy wi-fi ho an'ny 150 baht, miala amin'ny rihana voalohany, mivoaka ny No. 1. Mijanona eo akaikin'ny gara metro sy eny amin'ny lalana Khao San Road ny fiara fitaterana Limo. (ora fiaran'ny bus limo manomboka amin'ny 14 maraina ka hatramin'ny misasak'alina)
Raha mihoatra ny 2 ny olona dia dia mahasoa kokoa ny maka taxi na manefa famindrana mialoha.
Raha mila miala avy eo amin'ny seranam-piaramanidina Don Muang mankany amin'ny seranam-piaramanidina ianao Seranam-piaramanidina Suvannaphumi (BKK - Suvarnabhumi) any Bangkok, dia azo atao maimaim-poana izany. Nisy fiara fitateram-bahoaka manokana mandeha amin'ny gorodona voalohany. Ho an'ny fitsangatsanganana maimaimpoana dia ampy hanehoana tapakila fiaramanidina na pasipaorao. Aza hadino fa ny lalan'ny fiara fitateram-bahoaka io dia madiodio, ary atokana ny fotoana hisian'ny lozam-pifamoivoizana.
Raha liana amin'ny teti-bola mankany amin'ny tanàna hafa any Thailand ianao, dia ny fiaran-dalamby (fiaran-dalamby manohitra ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina), midira any amin'ny Chatuchak station (Chatuchak). Tsy hoe ao anaty sisin-tany ihany, fa eo koa ny tobin'ny fiara fitateram-bahoaka. Avy any ny fiara fitateram-bahoaka handeha manerana an'i Thailand.
Seranam-piaramanidina Don Muang amin'ny sarintany, ary antsipiriany momba ny fifandraisana
Address: 222 Vibhavadi Rangsit Rd, Sanambin, Don Mueang, Bangkok 10210, Thailandy
telefaonina: + 66 2 535 1192
Scoreboard amin'ny seranam-piaramanidina Don Muang Airport
Ulasan momba ny seranam-piaramanidina Don Muang (famerenana Google)
Sarintanin'ny fizahan-tany sy ny torapasik'i Sri Lanka
Sarintany amin'ny Bali, Indonesia
Mahaliana fa any amin'ny firenena maro dia misy seranam-piaramanidina manam-pahaizana momba ny fanaovana serivisy an-trano sy LOKOSTERS. Ary rehefa afaka izany, amin'ny alàlan'ny tsy fidiny, ny mpandinika ny tapakila dia matetika manao tsinontsinona azy ireo, satria ny mora kokoa ny tapakila, mihakely ny mpanelanelana (aggregator). Ary voalohany aho, hanoro hevitra aho hitady tapakila hahazoana sidina mankany aminà seranam-piaramanidina toy izany fotsiny, ary tsy mino an-jambany hoe ny olan'ny aggregator mahazatra.
Tsaroako ny nahita tapakila iray tany Java 25 isan-jatony mora kokoa amin'ny seranam-piaramanidina mitovitovy amin'izany raha oharina amin'ny mpandrafitra ny seranam-piaramanidina. Ankoatra izany, tsy dia mifanalavitra ny toerana misy ny seranam-piaramanidina roa.
31.07.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Sarintanin'ny fizahan-tany sy ny torapasik'i Sri Lanka tsy misy
09.06.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Sarintany manintona an'i Bali, Indonezia tsy misy